Prime Day: Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Prime Day - Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ
Ignacio Sala | 21/06/2021 13:12 | အိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အိုင်ပက်
အဆိုပါတစ်ခုမှာ အားလုံးအမေဇုံချုပ်အသုံးပြုသူများကအများဆုံးမျှော်လင့်နေ့ရက်ကာလ, Prime Day, နှစ်များတစ်ရက်နှစ်ရက်ဖြစ်လာသည် (အနက်ရောင်သောကြာနေ့နှင့်တစ်ရက်တည်းမဟုတ်ဘဲတစ်ပါတ်သာကြာသောအဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့)
ယနေ့နှင့်နက်ဖြန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၌စိတ်ဝင်စားစရာအထူးလျှော့စျေးများပါ ၀ င်သည့်အမြောက်အများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီနေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါကကျွန်ုပ်တို့မလွဲနိုင်သည့်အထူးလျှော့စျေးများ။ သင်သိလိုလျှင် Prime Day တွင် Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများငါဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်
1 iPhone ကို
1.1 ယူအက်စ် (၂၀၀) မှ ၄၇၅ ယူရို
1.2 ၆၆၄ ယူရိုကနေ iPhone 12 mini
1.3 12 ယူရိုကနေ iPhone 756
1.4 ယူရို ၁,၀၉၉ မှ iPhone 12 Pro ကို
2.1 ယူရို (၄၀၄) မှ iPad Mini 2019
2.2 ယူရို ၈၂၉ မှ iPad 2021
2.3 ပထမနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက် Apple ခဲတံ
2.4 ၂၇၉ ယူရိုမှ Magic Keyboard 2020
2.5 ၉၉ ယူရိုအတွက် Logitech Combo Touch
3 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
3.13ယူရိုကနေစီးရီး 169
3.26ယူရိုကနေစီးရီး 369
4.1 ၁၈၈ ယူရိုအတွက် AirPods Pro
4.2 ၁၂၉ ယူရိုအတွက် AirPods
ယူအက်စ် (၂၀၀) မှ ၄၇၅ ယူရို
တရားဝင်တရားဝင်ရောင်းချသောအနိမ့်ဆုံး iPhone မှာ iPhone SE ဖြစ်သည် ၄.၇ လက်မမျက်နှာပြင်သည် iPhone 4,7 နှင့်ဆင်တူသည်.
ပုံစံ 256 GB ကိုယူရို ၅၄၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, 128GB ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် 10 GB version ထက်ယူရို ၁၀ ဈေးသက်သာတယ် entry ကိုမော်ဒယ်, 64GB ဗားရှင်းနေစဉ် အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပေးထားပါတယ်ခဲ Apple Store ၏တရားဝင်စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှော့စျေး: 475 ယူရို။
၆၆၄ ယူရိုကနေ iPhone 12 mini
iPhone 12 ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Apple သည် ၅.၄ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့် mini model ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ဈေးကွက်တွင်အက်ပဲလ်ကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအရောင်းအရမျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။ ၎င်း၏နယ်ပယ်ရှိပါတယ်။ ဒီ model ကကျန်တဲ့ iPhone 12 range model တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။
iPhone 12 mini သူ၏ဗားရှင်း၌တည်၏ 64 GB ကိုယူရို ၅၄၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်၏ဗားရှင်းနေစဉ် 128 GB သည်ယူရို ၇၄၉ သို့ရောက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် 256 ယူရိုအတွက် 849 GB ကိုမော်ဒယ်.
12 ယူရိုကနေ iPhone 756
iPhone 12 mini ကမင်းအတွက်အရမ်းသေးလွန်းတယ်ဆိုရင် Prime Day မှာ Amazon ကငါတို့အားကမ်းလှမ်းသည် ၇၅၆ ယူရိုအတွက် iPhone 12 64 GB။ ၏ဗားရှင်း 128 GB သည်ယူရို ၇၄၉ သို့ရောက်ရှိသည် နှင့် 256 GB မော်ဒယ် 908 ယူရို.
ယူရို ၁,၀၉၉ မှ iPhone 12 Pro ကို
သငျသညျသောအပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခံစားချင်လျှင် စျေးကွက်ထဲမှစွမ်းအားအရှိဆုံး iPhoneအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ iPhone 12 Pro ပါ 128 GB ဗားရှင်းကို 1.099 ယူရိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်.
128 GB ကိုအတိုကျလျှင်၏ကြင်နာ 256 GB ကိုယူရို ၅၄၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည် နှင့် 512 GB ဗားရှင်းသည်ယူရို ၁,၅၀၉ သို့ရောက်ရှိသည်.
ယူရို (၄၀၄) မှ iPad Mini 2019
အကယ်၍ သင်ကသေးငယ်တဲ့ iPad ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် iPad mini ကိုကြည့်သင့်တယ်။ 2019 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်အပေါ်ဖြန့်ချိသောဤမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ပထမမျိုးဆက် Apple Pencil နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်, A12 Bionic ပရိုဆက်ဆာကစီမံပြီး ၇.၉ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒီနေ့နဲ့မနက်အကြား၊ v ကိုကိုင်နိုင်တယ်ယူရို ၄၉၀ အတွက် ၂၅၆ GB GB.
256GB မော်ဒယ်လျှင် သင့်အတွက်အရမ်းကြီးလွန်းတယ်စဉ်းစားရမည့်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ၃၉၉ ယူရိုအတွက် ၆၄ ဂစ်ဘ်ဗားရှင်း.
ယူရို ၈၂၉ မှ iPad 2021
El iPad Pro 2021 M1 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည် ၎င်းသည်တူညီသောကုမ္ပဏီ၏ Mac များနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးအရာအားလုံးက Apple မှသူတို့အတည်ပြုရန်ငြင်းဆန်သောအနာဂတ်ပေါင်းစည်းမှုကိုညွှန်ပြနေသည်။ ၁၁ လက်မမော်ဒယ်ဖြစ်သည် 128 GB ဗားရှင်းကို 829 ယူရိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတူတူဒီဗားရှင်း မိုဘိုင်းဒေတာဆက်သွယ်မှုသည်ယူရို ၉၇၉ သို့ကျဆင်းသွားသည်။
256GB သိုလှောင်မှုနှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုဗားရှင်း 932 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျန်မော်ဒယ်များ သူတို့ကအဘယ်သူမျှမလျှော့စျေးရှိသည်၂၀၂၁ က ၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်လိုပဲ။
ပထမနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက် Apple ခဲတံ
အကယ်၍ သင်၏ Apple Pencil နှင့် iPad Pro တို့၏အကောင်းဆုံးကိုရယူလိုပါက Apple Pencil ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ဒီကိရိယာကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးနဲ့ရနိုင်သည်။ ပထမနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက်၊ မော်ဒယ်များ သူတို့ဟာမတူညီတဲ့အိုင်ပက်ဒရိုက်ကိရိယာနဲ့လိုက်ဖက်တယ်။
El ဒုတိယမျိုးဆက် Apple ခဲတံပုံမှန်ဈေးနှုန်းမှာ ၉၉ ယူရိုရှိပြီးယနေ့နှင့်မနက်ခင်းအကြားရှိသည်။ သာ 67,25 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မော်ဒယ်, ၁၁ လက်မ iPad Pro ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့် ၁၂.၉ လက်မ iPad Pro 11rd Generation နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, 111,50 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 135 ယူရိုအခါ။
စျေးပေါသော Apple Pencil ကို Crayon ဟုခေါ်ပြီး Logitech မှပြုလုပ်သည်။ ဤစက်သည် iPad 2019 နှင့်နောက်ပိုင်းထွက်မော်ဒယ်များ (iPad Pro မဟုတ်) အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် 50 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်.
၂၇၉ ယူရိုမှ Magic Keyboard 2020
iPad Pro 2021 ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်က Apple သည် Magic Keyboard ကိုအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သော 5mm အထိတိုးမြှင့်ထားသော Magic Keyboard ကိုအသစ်ပြန်ပြောင်းခဲ့သည်။ ခြားနားချက်ကိုလက်တွေ့မမြင်နိုင်ပါ။ ၂၀၂၀ တွင် Apple မှထုတ်လုပ်ခဲ့သော Magic Keyboard အတွက် ၁၂.၉ လက်မ iPad Pro ကို Amazon တွင်ယူရို ၂၇၃ ဖြင့်သာရနိုင်သည်.
အသစ်က iPad Pro 5th Generation အတွက် Magic Keyboard (2021) 12,9 လက်မရရှိနိုင်ပါသည် Apple Store ရှိဈေးနှုန်းအတိုင်း ၃၉၉ ယူရိုရှိသည် (ကဇူလိုင်လ 13 သည်အထိမရရှိနိုင်ပေမယ့်) ။ ဒီမော်ဒယ်ဟာ ၂၀၂၀ မော်ဒယ်နဲ့မတူဘဲ keyboard နဲ့ iPad Pro ကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်။
El ၁၁ လက်မ iPad Pro 2021 အတွက် Magic Keyboardဒီအနိမ့်ဆုံးလျှော့စျေးမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံစံရဲ့အထူဟာမနှစ်ကလိုပဲအတူတူပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၀၂၁ က ၁၂.၉ လက်မ (miniLED) မော်ဒယ်မှာမျက်နှာပြင်နဲ့မတူလို့ပါ။
၉၉ ယူရိုအတွက် Logitech Combo Touch
အမေဇုံမှာစျေးပေါတဲ့ iPad ကီးဘုတ်တွေကတော့တော်တော်ကိုဆိုးရွားပါတယ် သူတို့ထဲက ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာလုံးဝအသုံးမကျဘူး သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဤကိရိယာနှင့်နာရီပေါင်းများစွာရေးရန်ဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို၎င်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် Logitech Como Touch, QWERTY အပြင်အဆင်ဖြစ်သော Trackpad နှင့်တွဲဖက်သည့်ကီးဘုတ်၊ ၆ မျိုးဆက်အိုင်ပက်ဒ် ပြီးတော့ဘာလဲ 94,39 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ.
ဒီပုံစံကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် 2021 ယူရိုအတွက် iPad Pro ကို 229တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း Magic Keyboard အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ, ဒီရက်ရောင်းဖို့မဖြစ်လျှင်ပင်။
3 ယူရိုကနေစီးရီး 169
၁၆၉ ယူရိုသာရှာရမယ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 3, watchOS 8 တွင်ကျန်တော့မည့်ပုံရသည်၊ သို့သော်အဆုံးတွင်မူထိုအရာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံး Apple Watch တွင်ငွေအမြောက်အများကိုမဖြုန်းချင်ပါကသင်လုပ်နိုင်သည် ဒီ ၁၆၉ ယူရိုသာ ၃၈ မီလီမီတာမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။
38mm model သည်သင့်အတွက်သေးလွန်းပါက၊ 42mm မော်ဒယ် (ဒီ model အတွက် Apple ကကမ်းလှမ်းတဲ့အကြီးဆုံး) 199 ယူရိုသည်.
6 ယူရိုကနေစီးရီး 369
သာ 389 ယူရို, သင်မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် Apple Watch Series6နှင့် GPS နှင့် 44mm ပါရှိသည်, လူမီနီယံအမှုနှင့် silicone သိုင်းကြိုးနှင့်အတူမော်ဒယ်။ 40mm မော်ဒယ်များကိုတရားမျှတစွာရောင်းချနိုင်သည် 369 ယူရို.
ဒါ့အပြင်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ဒေတာဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူမော်ဒယ်။ မိုဘိုင်းဒေတာနှင့်အတူ 6mm စီးရီး 40 418 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် နေ ၄၄ မီလီမီတာဗားရှင်းသည် ၄၅၉ ယူရိုအထိရှိသည်.
Apple Watch Series6တွင်ပါဝင်သည် အသွေးအောက်စီဂျင်မီတာ ထို့အပြင်၎င်းသည်စီးရီး ၄ မှဤမော်ဒယ်လ်ပါ ၀ င်သော electrocardiogram လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
၁၈၈ ယူရိုအတွက် AirPods Pro
သင်တစ် ဦး AirPods ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အားသာချက်ကိုယူဤနေ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေလျှင်, သင့်ရဲ့နေ့ရက်ရောက်လာပြီ။ Amazon တွင်ရှာတွေ့နိုင်သောအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာဆူညံမှုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူ Apple ၏ကြိုးမဲ့နားကြပ် AirPods Pro တွင်တွေ့နိုင်သည်။ 188 ယူရိုနီးပါး ယူရို ၁၀၀ ဈေးသက်သာတာက Apple Store ထက်စျေးသက်သာပါတယ်။
၁၂၉ ယူရိုအတွက် AirPods
AirPods ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုလည်းaမှာရရှိနိုင်ပါသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့စျေးနှုန်း။ မော်ဒယ်ကိုရှာတွေ့နိုင်တယ် ကေဘယ်လ်အားဖြင့် ၁၂၉ ယူရိုဖြင့်အားသွင်းသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Prime Day - Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ
Spatial နှင့် lossless audio သည် Android အတွက် Apple Music beta ကိုထိသည်
အကောင်းဆုံး Anker သည် Amazon Prime Day အတွက်ကမ်းလှမ်းသည်